Blister kurongedza muchina Vatengesi uye fekitori - China Blister kurongedza muchina Vagadziri
Dpp-120 Mishonga yeMuchina Dpp-120 Blister Kurongedza Muchina
Pharmaceutical Machinery Dpp-120 Blister Kurongedza Muchina 1. Chigadzirwa mufananidzo: 2. Zvimiro: 1. Inotora iyo nyowani mhando mhando yepamusoro-simba yekufambisa nzira kuronga cheni uye kutyaira iyo huru yekutyaira shaft. Iko kukanganisa uye ruzha rweimwe giya vhiri rekufambisa rinogona kudzivirirwa. 2. Kunze kudzora system inogamuchirwa; zvakare inogona kuve yakagadzirirwa kuona uye nekuramba basa chishandiso chenhamba yemishonga zvinoenderana nezvinodiwa nemushandisi. 3. & nbs ...
Dpp-150 otomatiki Alu PVC Blister Machine yeThebhu uye Capsule / Alu Alu Mishonga Kurongedza Mushonga
DPP-150 Kugadzira Pharmaceutical Packaging Machine, Blister kurongedza Machine 1. Chigadzirwa chigadzirwa 2. Zvimiro: 1. Inotora iyo nyowani mhando mhando yepamusoro-simba yekufambisa nzira kurongedza ngetani uye kutyaira iyo huru yekutyaira shaft. Iko kukanganisa uye ruzha rweimwe giya vhiri rekufambisa rinogona kudzivirirwa. 2. Kunze kwekutonga system kunogamuchirwa; zvakare inogona kuve yakagadzirirwa kuona uye kurasa basa chishandiso (Omron Sensor) Dpp-80 Kugadzira Mishonga Kurongedza Kurongedza / Package Pack M ...
Dpp-150 Capsule Bilster Kurongedza Muchina, Capsule Bilster Kuisa Muchina
Dpp-80 Chokoreti Butter Blister Kurongedza Packaging Machine
Dpp-80 otomatiki Liquid Blister Kurongedza Mushini weJam
Dpp-80 Alu Plastic Kurongedza Muchina, Alu PVC Blister Machine
Dpp-80 Kugadzira Pharmaceutical Packaging Machine, Blister kurongedza Muchina 1. Chigadzirwa Mufananidzo 2. Zvimiro: 1. Inotora iyo nyowani mhando mhando yepamusoro-simba yekufambisa nzira kuronga cheni uye kutyaira iyo huru yekutyaira shaft. Iko kukanganisa uye ruzha rweimwe giya vhiri rekufambisa rinogona kudzivirirwa. 2. Kunze kudzora system inogamuchirwa; zvakare inogona kuve yakagadzirirwa kuona uye kurasa basa kifaa (Omron Sensor) Dpp-80 Manufacturin ...
Dpp-80 Alu PVC Kurongedza Muchina, Alu PVC Blister Machine
Dpp-80 otomatiki Blister Capsule Pill Kurongedza Muchina
Dpp-80 Auto Alu-PVC / Alu-Alu Kupisa Kuisa Chikafu Blister Pack Machine